दरबार हत्याकाण्डमा विरेन्द्रका एडिसीको बयान – बिलियर्ड टेबलनजिक भुइँमा ढलेका थिए विरेन्द्र « Janata Times
दरबार हत्याकाण्डमा विरेन्द्रका एडिसीको बयान – बिलियर्ड टेबलनजिक भुइँमा ढलेका थिए विरेन्द्र
दरबार हत्याकाण्डमा गोली चल्दै गर्दा नारायणहिटीमा प्रवेश गर्ने शाही पाश्र्ववर्ती (एडिसी) सुन्दरप्रताप रानाले १८ वर्षपछि लेखेको दरबारको दुःखान्त’ पुस्तक बजारमा आउने भएको छ । दरबार हत्याकाण्ड र राजपरिवारसँग आफ्नो सम्बन्धमा आधारित रहेर उनले पुस्तक लेखेका हुन् । तत्कालीन राजा, रानी र युवराजको पाश्र्ववर्तीका रूपमा १७ वर्ष दरबारमा बिताएका रानाले पुस्तकमा दरबारबारे आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गर्न लागेका हुन् । किताब पब्लिसर्सले प्रकाशन गरेको सो पुस्तकका केही सन्दर्भ यस्ता छन् –
स्वचालित हतियार नियन्त्रण गर्न स्वचालित हतियारै चाहिन्थ्यो । तर, गजेन्द्र (दीपेन्द्रका एडिसी)ले अटोमेटिक हतियार ल्याउलान् भनेर पर्खिरहने समय थिएन, म आफ्नो ‘होल्स्टर’मा रहेको पिस्तोल निकाल्दै बिलियर्ड हलतिर दगुरिहालेँ ।दगुर्दै जाँदा झ्यालबाट मेरा आँखा हलभित्र सरर्र पुगे, मान्छे पूरै सोत्तर भएर लडेको देखेँ । बिलियर्ड टेबलनजिक वीरेन्द्र सरकारको शरीर समातेर पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्रका ज्वाइँ डा। राजीव शाही बस्नुभएको थियो । त्यहाँ छिर्ने एउटै मात्र ढोका पूर्वतिर थियो, प्यासेजपट्टि अलिकति घुमेर जानुपथ्र्यो ।
यता अरू घाइतेलाई तारन्तार ल्याइँदै थियो । आपत्को त्यो वेला दरबारमा एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्था हुन सकेन, तर सुरक्षाकर्मीहरू तुरुन्त परिचालित थिए । घाइतेमध्ये कसैलाई भ्यान, कसैलाई मिनीबस, कसैलाई पिकअप, जे–जे भेटिन्छ, त्यसैमा हालेर अस्पताल ल्याउने काम गरियो । केहीबेरमा श्रुति सरकारलाई ल्याइयो । मौसुफलाई स्टिलको ट्रलीमा राखिएको थियो । अस्पताल ल्याइपुर्याउँदा मौसुफ जीवितै होइबक्सन्थ्यो । मैले छेउमा गएर हेरेँ, अतिशय पीडाले छटपटाउँदै ‘दुख्यो ! दुख्यो !!’ भन्दै तारन्तार कराइबक्स्यो । त्यो देखेर मैले डा. खगेन्द्रबहादुर श्रेष्ठलाई कोट्याएँ, ‘सी इज अलाइभ डाक्टर साब, केही गर्नुपर्यो ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘ठीकै छ, उहाँलाई केही भएको छैन, अलेलि दुख्यो होला ।’ उहाँले यसो भन्नु पनि स्वाभाविकै थियो । किनभने सर्सती हेर्दा अधिराजकुमारीको जिउबाट कतै पनि रगत बगेजस्तो र घाउ लागेजस्तो देखिएको थिएन । यस्तोमा डाक्टरहरूको ध्यान राजा, रानी, युवराज र अरू घाइतेतिर जानु स्वतः बुझ्न सकिने कुरा हो ।
खासमा श्रुति सरकारलाई जाँघमा गोली लागेको रहेछ, जो बाहिरबाट हेर्दा देखिएको थिएन । आफ्ना पति गोरखशमशेर राणा गोली लागेर ढलेपछि श्रुति सरकारले छोप्न जाँदा अप्ठ्यारो ठाउँमा लागेको गोलीतिर समयमै कसैको ध्यान पुग्न सकेन । मलाई अहिले पनि सम्झिँदा साह्रै थकथक लाग्छ, डाक्टरहरूले त्यतिवेला प्राथमिकताका साथ हेर्न सकेको भए श्रुति सरकारको ज्यान जाने थिएन कि १ तर, सायद नियतिको खेल अर्कै थियो । श्रुति सरकार आफ्नो चोटभन्दा पनि बुबामुमा बितेको आघातले छटपटिएको र कराइबक्सेको होला भन्ठानेछन् डाक्टरहरूले । अन्ततः मौसुफको प्राणपखेरु उडिहाल्यो ।
यता कोमामा राखिएका युवराज दीपेन्द्र सरकारको स्वास्थ्य खस्किइरहेको थियो । जुनसुकै वेला निधन हुन सक्ने अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा मौसुफपछिका राजगद्दी उत्तराधिकारी एवं तत्कालीन ‘राज्य सहायक’ अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई पूरापूर सुरक्षाका साथ राख्नु हाम्रो कर्तव्य हुन गएको थियो । ‘राजा बिते, राजा अमर रहून्’ भन्ने फ्रान्सेली उखान नै छ । वीरेन्द्र सरकार र त्यसपछि दीपेन्द्र सरकारको पालैपालो निधन भए पनि गद्दी खाली राख्न मिल्ने थिएन । त्यसैले तेस्रो राजाको राज्यारोहणका वेला आइहाल्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका थिए । त्यसै सन्दर्भमा ज्ञानेन्द्र सरकारबाट हुकुम भयो, ‘आवश्यक पर्यो भने जुनसुकै वेला मलाई फोन गर्नू, म तयारै हुन्छु ।’
कोमामा राखिएका दीपेन्द्र सरकारलाई मैले ढोकैबाट हेरेँ । घ्यारघ्यार सास चलिरहेको थियो, दाह्री बढेर कालो भएको थियो र वेलावेलामा तर्सेर झस्किए जसरी शरीर चलाएको देखिन्थ्यो । रातदिनको तनाव र अनिद्राबाट थकित भएर म केहीबेर आराम गर्न राति नारायणहिटी दरबारकै क्वार्टरमा फर्किएको थिएँ, दीपेन्द्र सरकारको निधन भएको खबर छाउनी अस्पतालबाट आयो । जेठ २२ गते बिहान ३ः४५ बजे मौसुफको स्वर्गारोहण भएको डाक्टरहरूले घोषणा गरेका थिए । मैले तुरुन्त फोन गरेर ज्ञानेन्द्र सरकारलाई जानकारी दिएँ । ‘ठीक छ, म आएँ,’ मौसुफले भनिबक्स्यो । अस्पतालसम्म सवारी चलाउन म आफैँ निर्मलनिवास पुगेँ ।
धीरेन्द्रमाथि यसरी पारिवारिक सहमति लिएर ‘कारबाही’ गर्नुको मुख्य कारण थियो– बेलायतमा बसोवास गर्दै आएकी क्यानेडेली युवती सिर्ली ग्रेनीसँगको प्रेम–सम्बन्ध । ऐश्वर्य सरकारको क्रोधले सीमा नाघ्यो । फलतः धीरेन्द्रको मानपदवी मात्रै होइन, उहाँले आफ्नो सम्पत्ति देशबाहिर लैजान सहज नहोस् भनेर कूटनीतिक पासपोर्टसमेत खोसिएको थियो । बेलायतमा बसेकै वेला सिर्लीका तर्फबाट धीरेन्द्र शाहकी कान्छी छोरी उशाना लैला शाहको जन्म भयो, ०५० साउनमा । त्यहाँ सामान्य नागरिकको हैसियतमा बसिरहेका पूर्वअधिराजकुमारले दैनिक गुजारा चलाउन एउटा प्रशिक्षण केन्द्रमा गोराहरूलाई जुडो सिकाउने कामसमेत गर्नुपरेको थियो । उहाँ मार्सल आर्टस्का पुरानो खेलाडी भएकाले त्यहाँ त्यो सीप काम लागेको थियो ।